Salaamanews » Gaadiid badan oo ku xayiran gobolka Gedo oo roob xaagani uu ka da’ay (Sawirro)
Home » Dhaqaalaha, Warar Gaadiid badan oo ku xayiran gobolka Gedo oo roob xaagani uu ka da’ay (Sawirro) Print - Daabace: SalaamaNews - Nov 4th, 2012 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Bangiga adduunka oo lacag ku bixinaya sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha MasarDhoofinta xoolaha Soomaaliya oo waafaqaya heerka amniga ee caalamkaMadaxweyne Xasan Sheekh oo si kulul uga hadlay suuq xumida SoomaaliyaXukuumadda oo mamnuucday iibinta agabka ciidamada xooga dalkaPuntland oo dib u soo celisay markab ay afduubteen ciidan ay ilaalo kaga dhigtay Markab ganacsi
(Salaamanews)-Wararka ka imaanayo gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in roobka deyrta uu si toos ah kaga curtay deegaanada gobolkaasi.
Roob ballaaran oo ka da’ay gobolkaasi ayaa waxaa uu biya dhigay Wadooyinka, waxaana hoos u dhacay isku socodka gaadiidka iyagoo ka baqaya inay dhexfariistaan biyaha oo aad u badan.
Waddada isku xirta Dhooblay iyo Ceelwaaq iyo tan isku xirta Baardheere iyo Ceelwaaq ayaa waxaa ku xayiran gaadiid badan oo u rarnaa ganacsatada degmada Ceelwaaq.
Gudoomiyaha degmada Ceelwaaq Ibraahim Guuleed Aadan, ayaa sheegay in roob ka biya dhigay gobolka uu saameeyay dhamaan dadweynaha ku dhaqan gobolkaasi.
Raashinka qutul-daruuriga ayaa lagu soo warramayaa inuu gobolka ka sare kacay, taasoo loo aanaynayo hakadka ku yimid isku socodka gaadiidka ganacsiga.
Tags: ganacsiga, warar « Qoraalkii HoreAMISOM oo dalbatay ciidamo dheeraad ah oo la geeyo Jubooyinka	Qoraalka Xiga »Wafdi uu hogaaminayo safiirka yurub ee Soomaaliya oo gaaray Garoowe	Halkan Hoose ku Jawaab